Masiqaphele izilwane ezingena emgwaqeni | IOL Isolezwe
Masiqaphele izilwane ezingena emgwaqeni
Isolezwe / 24 May 2012, 11:50am / STHEMBISO SHANGASE
SAPHINDA sahlangana kuso isimo sokushaya ama hazard kule nkundla yezezimoto kwelakho lodumo eseliwele umfula ugcwele iminyaka eyishumi manje.
Ngisukunyiswa yishwa elehlele umsakazi ongaconsi phansi uMzokoloko Gumede wodumo lwe Mid Day Madness kwi Gagasi FM. Ngithe ngizizulela eMhlanga ngazithela kule nsizwa iqhoqhobele itonqozana lemoto encane. Ngimbuze ukuthi useyishonisephi inqokonqoko yeveni lakhe likanokusho uma esethushuka ngaleli kinati. Ngidabukile kwaphela ukuphapha ngesikhathi esengilandisa ngengozi emehlele.
UMzokoloko uthi umakhandakhanda wakhe washayisa inkomo emasontweni edlule esemgwaqeni u-N2 onqamula phakathi kweMandeni neGingindlovu. Uthi le nkomo yagulukudela emgwaqeni wehluleka ukuyivika noma ukumisa imoto yakhe ngokushesha ngoba kwakunezinye futhi izimoto ezazihambisana naye, kwachitheka izishebo. Uthi batholane phezulu nale nkomo yaguga ngokuphazima kweso imoto yakhe yagxaza amanzi kwadubula ngisho nebhamuza lomoya eliyisivikelo (air bag).
Uma ngimbuza ukuthi uyenze njani inkomo ebisidindilize phansi emva kwengozi, uthi akabanga esayinaka unake kakhulu ukuthi umonakalo osemotweni yakhe ungakanani nokuthi wabonga ukusinda kwakhe kule ngozi yenkomo.
Njengomuntu okukhonzile ukuguduza lelizwe ngemoto ngake ngathi nginqamula ngo-R74 phakathi kweSahlumbe noMuden ngafica imoto eyayishayise inkomo, engakuqaphela laphaya ukuthi umnikazi wemoto eyayilimele wayematasa ehlahlela lenkomo eyayishayiswe yimoto yakhe.
Nami ngiyavumelana nesenzo saloya mshayeli, ngoba imfuyo yiyo esuke idale umonakalo kufanele kube wumnikazi wemfuyo othwala izindleko zokukhanda imoto. Imoto ayisuki emgwaqeni iyoshayisa imfuyo esibayeni noma enkambini kodwa yimfuyo engena ngodli endaweni eyakhelwe izimoto, futhi eziyithelelayo. Mina ngikhule kuthiwa uma umuntu eshayiswe yisitimela kuthiwa akusiso isitimela esishayisa umuntu kodwa umuntu oshayise isitimela. Ngakho-ke noma zikhona noma zingekho izimpawu ezixwayisa ngemfuyo ewuvanzi emgwaneni kodwa kufanele akhokhe umnikazi wesilwane esisuke sesidale umonakalo.
Angithi nomshwalense wemoto yakho uye ufune imininingwane yemoto esuke ibandakanyeke engozini yomgwaqo nawe, uma kuyinkomo noma inyamazane ayikho leyo mniningwane ngakho akekho osuke ezohlawuliswa ngoba ubunikazi bayo abunabufakazi obuphathekayo. Yingakho-ke ngiphakamisa ukuthi uma engaveli umnikazi wemfuyo esidale ingozi efana nale eyehlele uMzokoloko, kufanele olinyalelwe yimoto nabantu ayithathe azibonele ukuthi wenze njani ngaso leso silwane. Ngaphandle uma kuyisilwane esingadliwa usuyokhala uzithulise-ke mshayeli.
Cha bashayeli ningazishayisi-ke ngamabomu izimbuzi nezinkomo emgwaqeni ngoba nihashukele inyama bese nithi kwasho ama hazard, thina sikhuluma ngengozi yangempela into engavikeki, ebusuku khanyisani izibani ezigqamile ukuze nibone kahle naseceleni komgwaqo ukuze uma kuthushuka lezi zilokazane ukwazi ukuphepha.
Masibophe amabhande, sivale ama-hazard ethu sibuyele khona emgwaqeni sishayele ngokubuswa yimithetho yezokushayela kulelizwe size sihlangane sisaphephile nangesonto elizayo kuyo lengosi yezezimoto. Yimi owenu [email protected]